Ungayifumana njani iMiyalezo kaWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela kwakhona imiyalezo whatsapp?
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 218
Kukho iimeko apho kufuneka sifumane imiyalezo ethile kwenye indawo whatsapp incoko. Zisuka nje, siyakuxelela ukuba, ukuba uze kweli phepha ufuna isisombululo kulo myalezo ucinyiweyo, kufuneka sikuxelele ukuba lo ngumsebenzi ongenakwenzeka.
Ewe kunjalo, ukufumana imiyalezo kuWhatsApp ngokwemiqathango ngokubanzi kunokwenzeka ngaphandle kwaxa kungekho nto inokwenziwa. Kodwa ngenxa yoko, unendawo yokufumana inxenye enkulu yemiyalezo ethi ngenxa yezizathu ezithile okanye enye uyicime ngelo xesha.
Ngaba kukho umsebenzi othile okuvumela ukuba ufumane imiyalezo ye-WhatsApp esusiweyo?
Okwangoku, iqonga lisekhona ayifakwanga umsebenzi ovumela into enjalo. Unokufumana kwiwebhu, amanye amanqaku abhekisa kwesi sihloko. Uninzi lwabo, uya kufumanisa ukuba kukho izicelo ekuvumela ukuba uphinde ufumane olu hlobo lolwazi.
Nangona kunokwenzeka ukuba esinye sazo zonke izicelo sizakusebenza, kuyacetyiswa hlala ungayisebenzisi. Konke oku ngenxa yesizathu esilula sokuba ayizizo izicelo ezisemthethweni kwaye uya kuba semngciphekweni xa usebenzisa izicelo ezingaziwayo okanye zomntu wesithathu.
Kungenxa yoko le nto, eyona nto intle onokuyenza kukusebenzisa imisebenzi yemveli efanayo evumela ukuba zombini ifowuni kunye nokusetyenziswa okufanayo kukuvumele. Nangona kuxhomekeke kuqwalaselo onalo, kunokwenzeka kakhulu ukuba unokubuyisa okuninzi Ulwazi olucinyiweyo kwifowuni yakho.
Ungayifumana njani kwakhona imiyalezo ye-WhatsApp?
Phambi kokuqala nenkcazo yendlela onokuthi ngayo phinda ufumane imiyalezo ye-WhatsApp esusiweyoKubalulekile ukuba ukhumbule ukuba loo miyalezo icinyelwe nina nobabini, enye inguqulelo, ayinakubuyiselwa.
Ekuphela kwendlela yokubanakho ukuba nayo kwakhona ngaphandle kokuba ucimile ngokusisigxina, kukwenza ikopi yogcino ngaphambi kokwenza isenzo esinjalo nomyalezo. Ngale ndlela, nangona uyicimile, emva phinda ufumane ungaba nazo kwakhona.
Kuba uhlobo lokhuselo lwenziwa rhoqo ngokusekwe kuqwalaselo lwefowuni efanayo. Ezinye iimfowuni ziza nokucwangciswa okunjalo ukuba i-backups zenziwe ngexesha elithile yonke imihla. Ezinye ii-mobiles zikhubazekile.
Into elungileyo kukuba unokufikelela kuseto lwakho lweselfowuni kwaye ukhethe amaza kunye nexesha ofuna ukuba ugcino lwenzeke. Ngendlela efanayo, unokukhetha ukuba yeyiphi idatha eya kugcinwa kuxhomekeke kwisicelo osikhethayo.
Yenza ikopi ezikhuselayo kwisicelo esinye
Inkqubo efanayo yeWhatsApp phakathi kuseto lwayo ikuvumela ukuba ukhethe amaza apho kwenziwa khona i-backups. Unokhetho lokukhetha yonke imihla, ngeveki, okanye kanye ngenyanga.
Yenza isipele kwiGoogle Drayivu
Ukuze ukwazi ukusebenzisa le ndlela, kuya kufuneka uneakhawunti kaGoogle ebhaliswe kwiselfowuni. Apho unokugcina naluphi na uhlobo lolwazi olunxulumene nesixhobo sakho. Awungekhe ugcine kuphela I-WhatsApp i-backups okanye nasiphi na isicelo, kodwa ungagcina ulungiselelo olwenzileyo kwiselfowuni kunye nezinye iinkcukacha.
1 Ngaba kukho umsebenzi othile okuvumela ukuba ufumane imiyalezo ye-WhatsApp esusiweyo?
2 Ungayifumana njani kwakhona imiyalezo ye-WhatsApp?
2.1 Ukugcinwa kwendawo
2.2 Yenza ikopi ezikhuselayo kwisicelo esinye
2.3 Yenza isipele kwiGoogle Drayivu
Ungawufumana njani umyalezo ocinyiweyo kaWhatsApp?